यी माओवादी नेता जो ऋण लिन्छन् तर कतै तिर्दैनन्, 'अति' भएपछि कृषि बिकास बैंकको यस्तो कदम !
ARCHIVE, BANKING, POWER NEWS » यी माओवादी नेता जो ऋण लिन्छन् तर कतै तिर्दैनन्, 'अति' भएपछि कृषि बिकास बैंकको यस्तो कदम !
रुकुम- रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद रातो कामीले कृषि विकास बैंकमा तिर्नुपर्ने ४ लाख ऋण नतिरेपछि सर्वत्र बेइज्जत भएको छ । ४ बर्षअघि उनले लिएको ४ लाख ऋण नतिरेपछि अहिले बैंकले ऋण चुक्ताको लागि मंगलबार सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । कामीले साविकको आठबीस डाँडागाउँमा रहेको मौराखारा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत साबुन उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै रु चार लाख ऋण लिएका थिए ।
संस्थाको तत्कालीन अध्यक्ष हुँदा २०६८ सालमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लिएको रकमको अहिलेसम्म ब्याज र साँवा कति पनि नतिरेको बैंकको भनाइ छ । उक्त संस्थाले मासिकरुपमा नौ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा युवा स्वरोजगारअन्तर्गतको रकम लिएको थियो । रातो कामी प्रदेशसभा सदस्यसमेत भइसक्दा उनले नेतृत्व गरेको संस्थाले लिएको साँवा र ब्याज तिर्न नसकेको बैंकका सूचना अधिकारी जोखबहादुर खड्काले जानकारी दिए । बैंकले बेलाबेलामा पत्र तथा जानकारी गराएपनि कामीले साँवा र ब्याज तिर्न नआएको उनको भनाइ छ ।
मौराखारा कृषक सहकारी संस्था लिमिटेडले हाल कृषि विकास बैंकमा रु चारलाख साँवा र रु तीन लाख ८० हजार ३१३ ब्याज गरेर जम्मा रु सात लाख आठ हजार ३१३ तिर्न बाँकी छ । ऋण लिएदेखि उक्त सहकारी संस्था लिमिटेडले कुनै किस्तामा ब्याज तथा साँवा बैंकमा दिएको छैन । ऋण लिएदेखि सो संस्था समेत सञ्चालनमा नरहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित : Thursday, December 28, 2017
Tags : ARCHIVE, BANKING, POWER NEWS